Texas ပြည်နယ် ဆန္ဒပြပွဲပစ်ခတ်မှု (သတင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ) - page 1
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်၊ ဒါးလက်စ်မြို့မှာ ကြာသပတေးနေ့ညက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲတခု အတွင်း ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ်တဲ့ သေနတ်သမားတွေလို့ သံသယရှိသူသုံးဦးကို ဖမ်းဆီး ထားပြီး လေးယောက်မြောက်လူကတော့ သေဆုံး သွားတယ်လို့ ဒါးလက်စ် ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ shooting.
5 Bystanders stand near pollice baracades following the sniper shooting in Dallas on July 7, 2016.
6 Police attempt to calm the crowd as someone is arrested following the sniper shooting in Dallas on July 7, 2016.
7 Dallas police detainadriver after several police officers were shot in downtown Dallas on July 7, 2016. Snipers apparently shot police officers during protests and some of the officers are dead, the city's police chief said inastatement.
8 Law enforcement sweeps the area for explosives afterashooting in downtown Dallas on July 8, 2016. Snipers opened fire on police officers in the heart of Dallas on Thursday night, killing some of the officers.